आमासंग शारी/रिक सम्पर्क गरेको त्यो केटो जव छोरी माग्न त्यहि घर गयो…. – Kavrepati
Home / समाचार / आमासंग शारी/रिक सम्पर्क गरेको त्यो केटो जव छोरी माग्न त्यहि घर गयो….
आमासंग शारी/रिक सम्पर्क गरेको त्यो केटो जव छोरी माग्न त्यहि घर गयो….
admin September 22, 2021	समाचार Leaveacomment 118 Views
काठमाडौं । एक युवकले सामाजिक सञ्जालमा डेटिङको सबैभन्दा आश्चर्य पार्ने घटना सेयर गरेका छन् । घटना पढ्दा सबैलाई अचम्म लाग्यो । उनीहरुले यसलाई कुनै कथाभन्दा कम ठानेका छैनन् ।
आखिर के हो त घटना ?टिन्डर(डेटिङ एप्लिकेसन/वेबसाइट)मा म्याच भएपछि एक केटीसँग केटाको प्रेम बस्यो । गर्लफ्रेन्डले आफ्नो अभिभावकसँग भेट्न बोलाए । तर त्यहिँ साँझ उसले जीवनमा नसोचेको घटनाको सामना गर्नुपर्यो ।
२१ वर्षको युवकले केहीवर्षपहिला ४० वर्षीया महिलासँग सम्बन्ध राखेका थिए । एक बारमा भेटिएका दुईको सम्बनध शारी/रिक सम्बन्धसम्म पुगेको थियो ।
बारमा भेटिएको महिलासँगको केही महिनापछि युवकले डेटिङ साइट टिन्डरमा १९ वर्षकी केटीसँग भेट्यो र दुवैको प्रेमसम्बन्ध शुरु भयो । दुवैबीचको सम्बन्ध यति राम्रो भयो की केटीले केटालाई आफ्नो अभिभावकसँग भेट्न बोलाइन् ।
तर युवकले उसको आमाको नाम नै भनिदिएपछि केटीले उसको कुरामा विश्वास गरिन् । त्यसपछि उनीहरुको ब्रेकअप भयो। युवकले सोसल साइट रेड्डिटमा आफ्नो नाम नलेखि यसरी पूरा घटना लेखेका छन् ।
यो पनि – आ’जको वर्तमान स’मयमा, प्रत्येक व्यक्ति सबैभन्दा सुन्दर देख्न चाहन्छन्, तर बढ्दो वायु प्रदूषण र व्य’क्तिको तनावको कारण, छा’लाको प्राकृतिक चमक हराउँदै जान्छ, जसको कारण अनुहारको चाउरीपन दिनदिनै बढ्दै जान्छ ।
कारण यो छ कि अनुहारमा कुनै पनि चमक देखा पर्दैन, त्यसैले मानिसहरूले बजारमा फेला परेको रा’सायनिक उत्पादनहरू बढी मात्रामा प्रयोग गर्छन् । जसले गोरोपन बढाउँछ तर क्रीम प्रयोग गर्न रोक्ने बित्तिकै त्यसको साइड इ’फेक्ट देखा परिहाल्छ, त्यसैले रासायनिक बढी मुल्य पर्ने उत्पादनहरूको सट्टा तपाईले घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
आउनुहोस् जानौँ काँचो आ’लुलाई त्वचाको लागी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त ? यदि तपाई रातको सुत्ने समयमा आलुको टुक्रालाई काटेर आफ्नो अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसरी लगाउनाले तपाईको अनुहारमा भएको कालो धाग धब्बा र पिम्पल्स हटेर जानेछ र अनुहारको रगं पनि बदलिनेछ ।
यदि तपाईको अनुहार कालो कालो छ भने पनि यो ढिलो ढिलो गरेर भएपनि हटेर जानेछ । यदि तपाई आफ्नो अनुहारको कालोपन हटाउन चाहानुहुन्छ भने पनि तपाई आलुको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यसको लागी तपाईले रातमा काँचो आलुलाई मिक्सरमा पिस्नुहोस् र यसमा १ चम्चा काँचो दुध मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । र यस पेस्टलाई रातको समयमा अनुहारमा राम्रोसँग लगाउनुहोस् र बिहान उठेर पानीले मुख धुनुहोस् । यस्तो गर्नाले तपाईको अनुहार चम्किनेछ ।
Previous यिनै हुन् मुख्य योजनाकार खड्गबहादुर, जसले ६ जनाको ज्यान लिएर प्रहरी र पत्रकारलाई यसरी बेवकुफ बनाएका थिए !
Next कार दुर्घटना हुँदा चर्चित अभिनेत्रीको डु’बेर मृत्यु